Daraasaad : Aragti U gaar ah Ragga dhibna ku ah Dumarka.... - iftineducation.com
Daraasaad : Aragti U gaar ah Ragga dhibna ku ah Dumarka….
aadan21 / March 1, 2012
Ragga Dila Dumarka
iftineducation.com – Tix-raac mudo dheer soo socday ayaa lagu helay in ragga ay yihiin kuwa aad uga fakaro ama ku taamo Galmo ayagoona in badan 70% ay yihiin dhanka dumarka oo ragga ay badanyihiin.
Daraasadahaan ayaa ahaa kuwa in muda ah soo socday ayadoona dadkii lagu tijaabiyay 50% arinta ay noqotay mid sax ah oo lagu kalsoonaan karo.
hadaba si aan wax badan u ogaano ayaan rabaa inaan soo qaato ilaa dhowr qaab oo lagu sameeyay daraasada ayadoona qeybahaan ay yihin kaliya kuwa laga soo helay dadkii tijaabada lagu sameeyay: –
Dumar badan: In uu laba xaas lahaado oo ay hal guri la degan yihiin, walibana ay mid seddexaad ugu jirto safka.
Galmo joogta ah: In uu helo galmo joogta ah mar kasta iyo meel kasta oo uu joogo oo uu dareenkiisu kaco.
In ay matasho xaaskiisu naag kale :Raga xaaska leh oo ilaalinaya jiritaanka qoyska ayaa waxa ay ku fikiraan in ay xaaskiisu iska dhigto naag kale oo aanu aqoon. Taas oo uu ragu ka helo dareen badan hadii ay xaaskiisu sidaas samayso.
In ay la raaxaystaan naag ayna aqoon :Sida aan kor ku sheegnay in ay ku fikiraan in xaaskoodu matasho qof aanay hore u araga ayaa waxa ay ku tusaysaa in ay galmo la samyn lahaayeen naag kale oo ayna aqoon. Laakiin uu damiirku u ogolayn.
Wax ay ku fikiraan waxa aad u mamnuuca ah: Waxa kale oo ay ku fikiraan in ay xiriir la sameeyaan xaaskooda saaxiibadeed ama ay aad ugu fikiraan haweenayda ka ah maamule shaqada ay ka shaqeeyaan.
Waxa kale oo ay ku fikiraan gabadh ka yar xaaskooda ama ayaga oo leh harem ( oo ah dumra badan) oo ay qabaan. Waxa kale oo ka mid ah uguna damaysa arimahan kuwa ku fikira in ay is garaacaan. Taas oo afka qalaad lagu dhaho “sadomachocism”.
Guud ahaan daraasadaan ayaa noqoneyso mid wax badan ka turjumi doonto arimaha sida gaarka ah u saameeyo ragga iyo dumarka oo inta badan ah laba nuuc oo uu ilaahay abuurtay ujeedana u abuuuray.
Daawo Sawiro : Warbixin Dheer oo laga soo Ururiyey Shirka Magaaladda London lagu soo Gabagabeeyey.
Marabtaa In Jaceylkaaga Uusan Qof Kale Kugula Tartamin – Raac Taladaan.